Dibadbax ay dad ku dhinteen oo lagu diidan yahay ninkii ugu horeeyay ee ku tilmaama Al Qaacidda beelaha deggan galbeedka Hiraan oo ay Ciidamada Itoobiya xirtay iyo Wafdi uu hoggaaminayo ra'isul wasaare Geeddi oo Nayroobi u aaday in uu kula kulmo mas'uuliyiin ka tarsan beesha Caalamka oo ay ka mid tahay Jendai Frazer. Ruunkinet 07/01/07
Dibadbax ballaaran oo uu ugu yaraan kal qof ku dhintay qaar badanna ku dhaawcmeen ayaa maanta ka dhacay magaalada Beledweyne.
Dibadbaxan oo ay soo abaabuleen dadka ku dhaqan bariga magaalada Beledweyne ayaa lagu diidanaan xarig ay ciidamada Itoobiya ku xireen Col. Mukhtaar oo uu dhawaan u magacaabay madaxweyne Yuusuf taliyaha ciidamada xoogga ee Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe.
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah oo u badan maleeshiyad laga keenay Puntland kuna sugan magaalada Beledweyne ayaa rasaas ku furay dadkii mudaaharaadayay ayagoo halkaasi ku dilay hal ruux kuna dhaawacay sida la sheegay qaar kale.
Col. Mukhtaar oo horay ugu tilmaamay in ay xiriir la leehiyiin Al Qaacidda inta badan beelaha deggan galbeedka Hiiraan ayaa la xiray kadib markii uu sii daayay guddoomiyihii maxaakiimta oo ay soo qabteen qaar ka tirsan booliiska magaalada Beledweyne.
Dhanka kale, ra'isul wasaare Geeddi iyo wafdi isugu jira ururada bulshada iyo siyaasiyiin ayaa maanta u duulay magaalada Nayroobi kadib markii Jendai Frazen oo ah kaaliyaha arrimaha Afrika ee wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka u sheegtay in ay ku kulmaan Nayroobi.
Jendai Frazer oo la filayay in ay tagto magaalada Muqdisho ayaa ka baaqsatay kagadaal arrimo la xiriira ammaankeeda.
Prof. Geeddi ayaa sidoo kale shirar kula yeelan doona magaalada Nayroobi mas'uuliyiin ka tirsan beesha Caalamka ee fadhigoodu yahay Kenyaa.